पुनर्वासमा बलात्कार प्रयासको आरोपमा एक युवा पक्राउ – Hamrai Sajha Patrika
By संवाददाता	 On २०७६, ४ कार्तिक सोमबार १८:५१
कञ्चनपुर, कार्तिक ४
पुनर्वासको आईबिआरडीमा बलात्कार प्रयासको आरोपमा हिजो एक युवक पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा वडानम्बर ६ बस्ने २३ वर्षका विशाल बि.क. रहेका छ्न । निज बि.क.ले तेह्र वर्षीया किशोरी अनु(नाम परिवर्तन)लाई बलात्कार प्रयास गरेको पीडितका बाजे बले सुनारले बताएका छन । घरमा बाजे र नातिनी मात्रै बस्दै आएका थिए ।
” मेरो नाम बले सुनार हो । उमेर ७६ बर्ष पुगे । घरमा बाजे र नातिनी मात्र बस्छौ । श्रीमति छैनन । हिजो अस्पताल जान तयार भएको थिएँ । नातिनी मेरो अगाडि आएर रोई । किन रोएको भनेर सोधेँ । अस्पताल गएर कहिले आउनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरि । म आईहाल्छु नि एकदुई घण्टामा भनेर उत्तर दिएँ । “छिट्टै आउनु है बाजे” भनेर नातिनीले फेरि भनेपछि किन रोयौ ? के समस्या छ ? भनेर मैले प्रश्न गरे । एक छिन केही बोलिन । कर गरेर सोधेपछि मलाई अस्पताल गएर छिट्टै आउन आग्रह गरि । किन तिमी यति डराएकी नातिनी? भनेर सोध्दा राती राती तीनजना केटा आउछ्न, दुई जना बाटोमा बसेर बाटोमा कोहि आउँछ्न कि भनेर हेर्छन र एकजना आएर मुख थुनेर शरीरमा हात लगाउने र फोहोरी फोहोरी काम गर्ने गर्छन् त्यसैले तपाईं नजानुस भन्न थाली । त्यसपछि म साह्रै चिन्तित र दुखी भए । छिमेकीहरुले बोलाएर हो वा आफै प्रहरी आएको थाहा भएन। नातिनीलाई अस्पतालमा चेक गर्नुपर्छ भन्दै लगेका छ्न । ” पीडित किशोरीकि बाजेले हाम्रै साझा पत्रिकालाई बताए ।
हाल पीडित किशोरी र आरोपी युवकको स्वास्थ्य परिक्षण भईसकेको र त्यसको परिणाम आउन केही दिन लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ । आजै बिहान जाहेरी दर्ता भईसकेको र आरोपीलाई महेन्द्रनगर पठाईसकिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका ईञ्चार्ज वकिल बहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था D.K. फिडरद्वारा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको आयोजना
हुलाकी सडक प्रकरण: सिमामा पहरेदार भएर सडक निर्माण सम्पन्न गराउँछौ- पुर्व मन्त्री लाल बहादुर विश्वकर्मा २०७६, ४ कार्तिक सोमबार १८:५१
मातृभूमि रक्षाका लागि एकै दिन कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीका ‘चार बिओपी’ स्थापना । २०७६, ४ कार्तिक सोमबार १८:५१
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकियो २०७६, ४ कार्तिक सोमबार १८:५१
भारतको वकालत गर्ने सरिता गिरीको सांसद पद चैट । २०७६, ४ कार्तिक सोमबार १८:५१
रोकिएन भारतको दादागिरी: हातहतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेर हुलाकी रोड निर्माणमा अवरोध । २०७६, ४ कार्तिक सोमबार १८:५१